Nepal Dayari | जंगलमा आगो निभाउन गएका दुई छोरा आगोमै ज’लेर खरानी भए , बाबुआमाको साहारा खोसियो…….
जंगलमा आगो निभाउन गएका दुई छोरा आगोमै ज’लेर खरानी भए , बाबुआमाको साहारा खोसियो…….
चैत्र १९, २०७८ शनिबार ४३८ पटक हेरिएको
म्याग्दीमा जंगलमा लागेको आगो निभाउने क्रममा जलेर एक जनाको मृ”त्यु भएको छ । जिल्लाको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित भिरखर्क सामुदायीक जंगलमा लागेको लागेको आगो निभाउने क्रममा मंगलबार दिउँसो करिब तीन बजेको समयमा अन्दाजी २६ बर्षिय मबहादुर बोहराको घटना स्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । सोही आगलागिमा परी मृ”तक बोहराका भाई २१ बर्षिय मनबहादुर बोहरा ग”म्भिर घा”इते भएका थिए उनको पनि उपचारको क्रम मा नि”धन भएको हो।
सोमबार रातिदेखि लागेको आगो निय’न्त्रणमा आउन सकेको थिएन । जंगलमा लागेको आगो बस्तिमा आउन थालेपछि आगो निभाउने क्रममा ज”लेर मृ”त्यु भएको जिल्ला प्र”हरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी निरिक्षक तथा सुचना अधिकारी बिरेन्द्रराज गुरुङले जानकारी दिए । दरबाङ बजारबासी ,लायन्स क्लब ,दरबाङ विपद् व्यवस्थापन समिति ,जनप्रतिनिधी ,संघ संस्था र स्थानीयबासीको सहयोगमा प्रभु हेलीकप्टर मार्फत पोखरा स्थित बिएण्डबी अस्पताल लगिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार,मृ’तक बोहराका भाईको स्वास्थ्य अवस्था पनि ग”म्भिर रहेको थियो । इलाका प्र”हरी कार्यालय दरबाङमा खटिएको प्रहरी टोली ,स्थानीयबासी ,युवा क्लब ,लायन्स क्लब ,रेडक्रसकर्मीको सहयोगमा उद्धार गरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दरबाङमा ल्याइएको हो । मृ”तकको शव पो”ष्ट मार्टमको लागि बेनी अस्पताल ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सामान्य उपचार पछि घा’इते बोहरालाई थप उपचारको लागि हेलिकप्टर मार्फत पोखरा लगिएको लायन्स क्लब अफ म्याग्दी दरबाङका अध्यक्ष अमृत सापकोटाले जानकारी दिएका थिए । पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थहपाउनुहोस।